Psalmen 11 HTB - Nnwom 11 ASCB
2Kijk zelf maar,
3Als zo de bodem
4De Here woont in zijn heilige tempel,
5De Here stelt de oprechte mens op de proef,
6Boven het hoofd van de slechte mensen
7Want de Here is rechtvaardig.
1Awurade mu na mede me werɛ ahyɛ.
Adɛn na wotumi ka kyerɛ me sɛ,
“Tu te sɛ anomaa kɔ wo bepɔ so.
2Na hwɛ, amumuyɛfoɔ akuntunu wɔn tadua mu,
na wɔde wɔn mmɛmma asisi nhoma so
sɛ wɔbɛto wɔ esum mu
de awɔ akoma mu ahotefoɔ.
3Sɛ wɔresɛe fapem no a,
ɛdeɛn na ɔteneneeni bɛtumi ayɛ?”
4Awurade wɔ nʼasɔredan kronkron no mu;
Awurade te ne soro ahennwa so.
Ɔhwɛ nnipa mma,
nʼani hwehwɛ wɔn mu.
5Awurade hwehwɛ ɔteneneeni mu,
na amumuyɛfoɔ ne wɔn a wɔpɛ basabasayɛ deɛ,
ne kra kyiri wɔn.
6Ɔbɛtɔ gyaframa ne sɔfe a ɛrederɛ
agu Amumuyɛfoɔ so;
na mframa a emu yɛ hyeɛ bɛyɛ wɔn kyɛfa.
7Awurade yɛ ɔteneneeni,
na ɔpɛ atɛntenenee;
wɔn a wɔtene no bɛhunu nʼanim.
ASCB : Nnwom 11